Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Fihaviana sy Fanavakavaham-bolon-koditra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Aogositra 2010 21:11 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna
mpitendry zava-maneno Gnawa, tera-tany Maraokana
Maraoka, fihaonan-dalan'ny tontolo Atsinanana sy Andrefana, ny tontolo Eoropa sy ny tontolo Arabo hatry ny ela dia firenena ahitana fahasamihafana amin'ny lafiny maro, ary mihoatra noho izany aza, mahazaka ny tsy fitoviana amin'ny lafiny maro ny Maraokana. Amin'ny lafiny hafa, tahaka ny nosoratan'i  Smahane Bouyahia indray anefa dia hitan'ireo vahiny ho toa ny firenena miavonavom-bahiny izy.
Ao amin'ny lahatsoratr'i Bouyahia, ny misy kokoa dia ny ny fanavakavaham-bolon-koditra mihatra amin'ireo Mainty hoditra any Maraoka. Mandrafitra ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy miaraka amin'ny Maraokana, Saharahoia, mpifindra monina sy mpianatra avy any atsimon'i Sahara ny mainty hoditra ary ao koa ny Afrikana-Amerikana mbamin'ny Eoropeana. Na dia tonga noho ny antony samihafa avy any amin'ny faritra maro aza irey vahiny mainty hoditra ireo dia tafaray ho vondrona iray satria avakavahan'ny teratany Maraokana. Hoy manko i Bouyahia nanoratra :
Ho an'ny ankamaroan'ireo Maraokana, ity toetra tsy tia Mainty ity dia hita amin'ny fihetsik'izy ireo manoloana ireo vahiny Mainty hoditra izay tsy tafaharo tamin'ireo mponina na koa ireo izay tsy Silamo. Ity fanamboniana tena ity dia efa nisy hatramin'ny Fahagola. Tamin'izany fotoana izany, aman'arivony ireo andevo Mainty hoditra tany Maraoka. Ny sasany tao anatin'ireo miaramila Maraokana sy ny mpiambina tsotra, raha ny hafa kosa nanaraka ny asa nampiandraiketina azy ireo nandritra ny fitondran'Ahmed El-Mansour Eddahbi na tamin'ny fitondran'i Moulay Ismail tamin'ny taonjato faha 16 sy 17 mihitsy aza.
Nanoratra mikasika ireo mpianatra ihany koa i Bouyahia, izay matetika dia avy any amin'ireo firenena miteny Frantsay any Afrika ary matetika dia miverina any antanindrazany rehefa vita ny fianarany. Nolazainy ny amin'ny mpianatra Kongoley iray fa:
Any Maraoka, ireo fahasamihafana na ara-kolontsaina izany na ara-pinoana dia samy tsy ekena. Ny Mainty hoditra tsy Silamo ohatra dia tsy jerena tahaka ny Mainty hoditra Silamo. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny Maraokana Mainty hoditra sy ny vahiny Mainty hoditra. Nipetraka tany Frantsa nandritra ny 15 taona aho ary avy eo tany Côte d’Ivoire, Togo ary firenena maro hafa. Afaka miteny ampahatokisana aho fa tsy mitovy ny fandraisana aty (…) Tsy maro izahay no aty Maraoka kanefa toa tsy tian'ireo Maraokana.
Tao anatina fanadihadihana  ny Talk Morocco sy ny Togozine.com, nizara ny fiainana amin'ny maha mpianatra azy tany Rabat ny mpianatra iray antsoina hoe Christophe, ary niteny :
Raha ny mahakasika ahy, tsy afaka miresaka fifandraisana tanteraka aho. Mbola misy tsy takatro ireo fombafomba sasany sy ireo fomba mba tsy hitenenako hoe fanavakavahana izay mampalahelo fa tena misy any Maraoka. Mahakasika ireo vahiny amin'ny ankapobeny izany indrindra fa ireo Afrikana any atsimon'i Sahara. Tsy dia miaraka amina Maraokana betsaka izahay. Misy ireo sasany tena mahafinaritra fa ny hafa kosa te hanambaka anao fotsiny.
Niresaka mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ireo mpianatra Afrikana maro any Maraoka sy ny fiafenana, na ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna ihany koa i Christophe:
Tsy dia tena tsara ny fifandraisanay. Aleo atao hoe mba misy fifandraisana fotsiny. Tafiditra amin'ny raharaha maizina matetika ireo mpifindra monina miafina ka tsy tian'ny mpianatra ny mifandray amin'izy ireny sao miara-voasambotra aminy eo. Tsy mitovy ny antony nankanesanay taty Maraoka. Miafina ireo rahalahinay, miandry fotoana mety hahafahana miampita ny ranomasina Méditerranée. Ireo mpianatra kosa dia tonga teto ara-dalàna. Tsy manisy fahasamihafana amin'izany anefa ireo Maraokana. Mandiso ny eritrerin'izy ireo mikasika anay izany.
Tsy ireo mpitoraka blaogy rehetra no miombon-kevitra amin'ity fiampangana ho fisian'ny fanavakavaham-bolon-koditra ity. Xoussef, raha nanadihady ny lahatsoratra tamin'ny teny nanoratan'i Bouyahia azy dia manoratra  fa:
Efa namerimberina nandalina ity lohahevitra ity aho fotoana elaela izao, niezaka ny hamaritra raha tena fanavakavaham-blon-koditra marina na tsia ny fihetsik'ireo Maraokana manoloana ireo Mainty hoditra. Hita miharihary fa lohahevitra saropady io, satria tsy afaka hiampangampanga ireo olona mpanavakavam-bolon-koditra fotsiny amin'izao ianao, fa fiampangana goavana izany, ary satria izaho manokana dia tsy tena mahafantatra hoe ahoana no hanavahana ny fanavakavaham-bolon-koditra, ny fankahalana vahiny, ny tsy fahalalana ary ny fifikirana hitoka-monina. Misy hidiran'ny fialasalako koa ny fanaovana bambaray, mba ho fanamarinantena, raha mponina 30 tapitrisa eo ho eo no resahana. Kanefa rehefa mamaky ity lahatsoratra ity aho, nampangidihidy ahy ny hametraka ny fanamarihako, noho izany dia ity ilay izay.
Taorian'ny nahazoany fitenenana mikasika ny fizarana tsirairay tao amin'ilay lahatsoratra , dia namarana i Xoussef:
Nanana fifandraisana tsara teo amin'ireo mpianatra sy mpiara-miasa “Afrikana” hatrany aho, indraindray izaho irery no “fotsy” ao anatin'ny vondrona. Nanana tantara maro avy amin'ilay mpifanolo-bodirindrina masiaka aho, ireo ankizy manao toetra tahaka ny alika mirenireny, ny fitoraham-baton'ilay ramatoa ratsy fanahy ao amin'ny birao fikirakirana ny taratasy ahafahana monina any an-toerana. Naheno tsaho aho, ireo fanaratsiana, ary misy iray miavaka fa sady mpanavakavam-bolon-koditra no mpihatsaravelatsihy . Raha nanoratra lahatsoratra mikasika izany fotokevitra izany aho, dia fantatro fa mankany amin'ny fiampangana izany. Nefa nahita ity lahatsoratra ity ho mpanao bambaray, maniditsidina ny fandinihana ao, ny fampifangaroana ny lohahevitra samihafa mikiakiaka avy hatrany fa misy ny kary nefa saka mirenireny no misy [amboa sy amboadia no resahina tamin'ny lahatsoratra nadika].
Raha nanoratra izany aho dia mety nanamarika ny Couscous lehibe tamin'ny Zoma nataon'ilay mpifanolo-bodirindrina Moul hanout (mpitantana tranom-barotra) ho an'ireo mpianatra, ka nahita fomba hamazivaziana ny mpividy na dia eo aza ny sakana napetraky ny fiteny samihafa, tamina mpifankatia Maraokana-Senegaly mitondra ny zanany any amin'ny garabola isanandro sy ilay teatra hipoka mpianatra Afrikana manao fety. Ilay dokotera Maliana nampiteraka ahy(misaotra ràdoko)…
Ny lahatsoratra nadika nosoratan'i Bouyahia dia nivoaka tao amin'ny Morocco Board , ary niteraka adihevitra mafana.
Ny sarin'ireo mpitendry zava-maneno nalain'i eryoni  dia hita ao amin'ny Flickr ary nampiasana ny Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/08/06/8077/
 nivoaka tao amin'ny Morocco Board: http://moroccoboard.com/news/34-news-release/1124-racism-in-morocco